Faahfaahin dheeri ah ayaa ku socota Alibabaheena: https: //maijiao.en.alibaba.com
24 Safka RHINESTONE MESH
24 Safka RHINESTONE MESH AAN LAGA HELIN RHINESTONE
KOOXAHA BULSHADA BULSHADA
KU SULDAAN RHINESTONES
Dheemankee ugu qaalisan adduunka? Bal u fiirso khasnadaha abuuray taariikhda xaraashka
Waa maxay dheeman ugu qaalisan adduunka? Markay suurtagal ahayn in la go'aamiyo qiimaha, laga yaabee inaan soo koobi karno qiimaha giraanta dheeman iyada oo loo marayo dheemantii ugu qaalisanayd uguna qaalisanayd ee taariikhda xaraashka. Kuwani waxay sameeyeen giraan dheeman oo taariikhi ah taariikhda au ...
Suuqa Dahabka Dheeman, waa tartan u dhexeeya tikniyoolajiyadda iyo jacaylka
Waxaa qoray admin on 18-07-02
Dheeman si dabiici ah loo soo saaray ayaa soo muuqday bilowgii 1950-meeyadii. Si kastaba ha noqotee, illaa dhowaan, kharashyada wax soo saar ee ku-beerista dheeman waxay bilaabeen inay si aad ah uga hooseeyaan qiimaha dheemanta macdanta. Horumarka ugu dambeeya ee sayniska iyo teknolojiyadda ayaa si weyn hoos ugu dhigay qiimaha wax soo saarka o ...
Sidee loo doortaa dahabka kulanka sanadlaha ah?
Markay tahay Iiddii Guga ayaa imanaysa, maxaa loo diri doonaa TA si ay uga farxiso xitaa indhaheeda ku dhoolla caddeyso? Lingling wuxuu kuu sheegayaa in dahabka jawharadku ku filan yahay. Macnaha dahabka kaladuwan wuxuu u taagan yahay jacayl kala duwan ereyo sir ah. Ma sheegi kartaa in TA qiyaasi karto sax? Silsilad - Jacayl W ...
Jawharaddu runti way qarisay ereyadan sirta ah Ma qiyaasi kartaa?
by admin on 18-04-15
Cinwaanka:Xarunta dhexe ： Maya. 16, Waidaling, Daling Village, Yisanli Street, Yiwu City, Gobolka Zhejiang, Shiinaha
Telefoon Bilaash ah: 0086 13958400086